Inkqubo yoyilo ekudaleni i-logo entsha yeGuinness | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Ukuyila ilogo Ukusuka kwibrendi eyaziwayo kufuneka ahambe izandla zezona studio zaziwayo nodumileyo. Kwaye ngaphezu kolunye uphawu lwebhiya njengeGuinness, enye yezona zaziwa kakhulu emhlabeni.
Ibhiya kuthengiswa kumazwe angaphezu kwe-150 kunye nezigidi ezili-10 zebhiya eziselwa mihla le kwihlabathi jikelele IGuinnes kungekudala izokwazisa ilogo ehlaziyiweyo eyilwe yi-Design Bridge, isitudiyo esisekwe eLondon.
Ukuzisa i entsha ithatha uphawu lweGuiness eyaziwayo, Uyilo lweBhulorho lusebenzisa iimodeli ezenziwe zodwa kunye nokuhlekisa ngezixhobo ezahlukeneyo ezenziwe ngokukhokelwa ngabavelisi abathile behadi, iNiebisch & Treee.
Le nkqubo yokusebenzisana ivumele iqela bazicwilise kwiimilo nakwimigca uhadi, ukusuka kugoso lwentamo yeharmonic ukuya kwindlela izithunzi eziqikelelweyo kwisixhobo, kuqinisekisa ukuba uyilo lwakho lukhangeleka kwaye luzive luchanekile kangangoko.
Nje ukuba uyilo lweBhulorho lugqibe imizobo yabo, ndibasa kuGerry Barney, onomlinganiso wobukho Uyile ilogo yoLoliwe waseBritane ngo-1965. Utsale umbala wombala omnye we logo onokubonwa ngezantsi.
Ekugqibeleni kudlulile ukusebenza neNew North Press ukuvelisa kwakhona ilogo ngeendlela ezahlukeneyo zokushicilela ukufumana eyona ikulungeleyo ukuvelisa kwakhona umbala kwaye iya kuba yintoni into ekuthiwa yihabp yokugqibela.
Iziphumo zixutywe kwi Ubume obungalindelekanga obuchasayo umthunzi oqhelekileyo okanye nokunikezelwa kwe3D kwezinye iilogo.
I-logo yokugqibela iyamangalisa kwaye iyamangalisa. Ziphephe iindlela ezincinane kakhulu ethandwayo kwezi ntsuku. Iinkcukacha ziyaqapheleka ngakumbi kunye nelogo kubungakanani obukhulu.
Uyilo lweBhulorho lubhengeza ukuba ilogo entsha inokusebenza ngokugqibeleleyo kwezinye zeebhiya zobugcisa eYurophu kuhlelo olulinganiselweyo eAfrika. I-logo elula kakhulu ilungele abo bayixabisayo iGuinness elungileyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ukuphefumlelwa » I-logo entsha ye-Guinness ibhiya yi-Design Bridge
Imifanekiso eqingqiweyo yentsimbi kaGil Bruvel